Uncategorized Archive - IZONESUN TECHNOLOGY LIMITED
Ukubeka uphawu Imithethonqubo Yokusebenza Komshini Wokuphepha
Ukubeka uphawu kwemithetho yokusebenza kwemishini yokuphepha 1. Ngaphambi kokuqala kokusebenza komshini, amaphoyinti okugcoba omshini wokufaka uphawu angacindezelwa ku-grease ngezibhamu zikawoyela zokufakelwa, noma igcotshwe ngesandla. 2. Shintsha isondo lesandla ngesandla ngaphambi kokukhiqizwa. Lapho ujika, cindezela umcibisholo wesondo ukuze uhlole. Ukuthi ithange lingena yini, ikhava ephansi, i-turntable nekhanda lomshini…
Izinzuzo Ezisebenzayo Nezokusetshenziswa Komshini Welebula Onamacala Amabili
Imishini yokulebula emaceleni amabili isetshenziswa kakhulu ekudleni, amathoyizi, amakhemikhali ansuku zonke, elekthronikhi, umuthi, izinsimbi, amapulasitiki, ukuphrinta nezinye izimboni; ukufezekiswa okuyisisekelo kwezindiza, ebusweni bomkhiqizo, isikwele esibanzi ngaphezulu. Ukunemba kwesimo sokuxhumeka kuhle, ikhwalithi iphezulu, futhi ukuzinza kuphezulu; ukuvimbela imiphumela yokufakelwa: ukwenza ngcono ilebula yomkhiqizo,…
Ukuqapha Nokugcinwa Komshini Wokugcwalisa
Imishini yokugcwalisa ngokuyinhloko ikilasi elincane lemikhiqizo kumishini yokupakisha. Ngokombono wezinto zokupakisha, zingahlukaniswa zibe yimishini yokugcwalisa uketshezi, namathisela imishini yokugcwalisa, imishini yokugcwalisa impuphu, nemishini yokugcwalisa eyimbudumbudu; Ihlukaniswe ngemishini yokugcwalisa semi-othomathikhi nolayini bokukhiqiza bokugcwalisa okuzenzakalelayo. Imininingwane yokusetshenziswa nokunakekelwa komshini wokugcwalisa othomathikhi kunje…
Izinhlobo Ezihlukahlukene Zamashini Wokulebula Osebenzayo
Kunezinhlobo eziningi zemishini yokufaka ilebula ezenzakalelayo ezinemisebenzi ehlukile, kodwa imigomo eyisisekelo iyafana. Umdwebo umdwebo wesikimu womshini wokulebula oyisicaba, ekhombisa inqubo yokulebula izinto eziyizicaba: iroli yelebula ibekwa kuroli yokuqaqa yomshini wokulebula. Iqoqo lama-roller lenza ilebula, Misa futhi…
Indlela Yokuphatha Yelebula Elinembile Iphutha Lomshini Wokulebula Indiza
Akunandaba noma yimuphi umkhiqizo, ngemuva kokuyisebenzisa isikhathi esithile, okunye ukwehluleka okunjalo noma izinkinga kungenzeka ngezikhathi ezithile, njengomzimba womuntu. Kuphakanyiswa izixazululo nezinyathelo ezilandelayo ukuxazulula inkinga yokulebula okungalungile kwamalebuli acabalele. Kufanele siqale ngama-ejensi athile kumshini wokulebula ukuze sithole futhi sithole izinkinga ngamunye ngamunye.…
Ithemba Lokuthuthukiswa Komshini Wokugcwalisa
Ukuthuthuka okusheshayo kwesiphuzo saseChina, Izimakethe zobisi nezobhiya nazo ziqhube ukuthuthukiswa komkhakha wemishini yokupakisha. Kusukela ngawo-1980, I-China ingenise inani elikhulu lesiphuzo, imishini yokupakisha yobisi nobhiya minyaka yonke, umfutho wokungeniswa kwempahla kwamanye amazwe usakhula. Iningi lalemishini iyimigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo esheshayo enokwethenjelwa okuqinile futhi ephezulu…